Fomba tsara (Backlinks) tsara ho an'ny orinasanao an-tserasera?
Amin'izao androntsika izao, ny teny toy ny "voa-janahary" na "tsara" ny ravinkazo dia hatsipy tahaka ny adala. Mba hananganana fanentanana fananganana rindran-kaonty, tokony handinika tsara ny lisitra tsara, mahasoa ary voajanahary ianao, satria fepetra fototra i Google manome ny tompona tranokala.
Na hanorina ny fanentanana fanorenana rohy ianao, manatrika ny SEO, na ny lehibeny mandefa anao momba ny rohy malaza amin'ny tetikasa vaovao an-tserasera, dia zava-dehibe ny mahafantatra ny karazana rohy rehetra.
Ity lahatsoratra fohy ity dia natao hanampiana anao hahatakatra ny karazana rohy rehetra, hanome anao famaritana, ary hanampy anao hahatsapa ny karazam-bakoka azonao ahafahana manatanteraka ny raharaham-barotra.
Tsy manara-penitra (vola)
Mifanohitra amin'ny rindran-tsavily tsara, ity karazana rohy ity dia napetraka amin'ny votoatin'olon-tokana ary azo tsidihin'ny maso PR draharaha samihafa. Izy ireo dia navotsotry ny mpividy na tompon'ny solosaina hamoaka marika maromaro. Raha toa ka manana dofollow ny fivalanana tsy ara-dalàna, dia mety miteraka sazy Google araka ny fampiasana fitaovana Penguin. Ireo sazy ireo dia mety henjana ary miteraka latsa-paka ny tranonkala manan-danja.
Google dia mamerina rindran-damina tsy ara-nofo (karama) amin'ny alalan'ireo fepetra manaraka:
tsy rohy voajanahary no manara-maso ny fampitahana toy ny source UTM sy medium;
izy ireo dia voahodidinin'ny votoatin'ny fanohanana na dokam-barotra;
izy ireo dia avy amin'ny tranonkala izay mametraka sora-pampianaran'ny monetization.
Azonao atao ny manamarina raha manana tranonkala voajanahary na tsy ara-boajanahary ny tranonkala iray, mijery amin'ny alalàn'ny code de la webstee, baiko mivoaka avy any ivelany, ary fomba hafa tsy ara-boajanahary.
Misy tranga sasany rehefa mahita karazana backlinks. Ohatra, rehefa rohy voajanahary amin'ny sehatra rehetra izy io, saingy mampiasa mari-pamantarana hafa. Raha tsindrio eo amin'ny backlink ianao, dia haverina any amin'ny pejin-drakitra izay ahafahana manara-maso ireo mari-pamantarana. Ireo mpampiasa izay manaraka ity rohy ity dia afaka mandefa sy mampiditra azy mivantana any amin'ny loharanon-tranonkalany izay manome ny rohy voajanahary izay manana ireo sehatra ireo ihany koa. Vokatr'izany, dia tsy misy fatra tsy ara-boajanahary ianao, fa ny organic backlinks.
Mba hanatsarana ny kalitaon'ny backlinks semi-voajanahary, tokony ho azonao antoka fa rehefa mampiasa ny rohin'ny Internet amin'ny alàlan'ny rohy voatahiry ianao, dia mametraka loharano iray ahafahana mametraka sasantsasany voafaritra manokana amin'ny fanapaha-kevitra ny rafitra pejy organika Source .